ဦးစွန်းမှဆွဲခေါ်ခံရမဲ့လူတွေအကြောင်း – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on October 8, 2009 November 2, 2009 by kyawkyawoo	Posted in lying sinful forelock, Surah 96Tagged al Quran, allah, ကျမ်းမြတ်ကုရအန, စူရာကိုးဆယ့်ခြောက, ဆရာဂါဇီဟာရှင်, အ လ္လာ အရှင်မြတ, အရှင်မြတ်သည်ကလောင်နှင့်သင်ကြားသည်, ဦးစွန်းမှဆွဲခေါ်ခံရမဲ့လူတွေအကြောင်း, ဦးဏှောက, ကျော်ကျော်ဦး, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, islam, lying sinful forelock, miracles of Quran, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion
ကျွန်တော် ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ရဲ့ ပထမဆုံး ကောင်းကင်ကျစူရာဖြစ်တဲ့
စူရာ ၉၆ အာယတ်တော်၁၆ကိုLying Sinful Forelock
ဒီအပေါ်မှာ Islam ဘာသာဝင်ဆေးပညာရှင်အတော်များများ
က ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ရဲ့ကောင်းကင်ကျ ဗျာဒိတ်အဖြစ်သက်
စူရာ၉၆ ရဲ့ပထမဆုံးအာယတ်တော်က “ဖတ်လော့” “ဖတ်ပါလေ”
“အလ္လာအရှင်မြတ်ရဲ့နာမ တော်ဖြင့် ဖတ်ပါလေ” လို့ ဆိုပါတယ်။
မိုဟာမက် (عليه السلام )မှတဆင့်လူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းရှင်က ကျမ်းမြတ်ကုရ
အန်ကိုနားလည်အောင် ဖတ်ဖို့ ပထမဆုံးကောင်းကင်ကျဗျာဒိတ်တော်မှာ
အရေးအကြီးဆုံး နဲ့ပထမဆုံး လိုက်နာစေရန်အမိန့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ Recite လို့ခေါ်တဲ့ နှုတ်မှလိုက်၍ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ Read လို့
ခေါ်တဲ့ နားလည်အောင်ဖတ်ခြင်း အသုံးအနှုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရှင်အများ က read, ဖတ်လော့လို့ပဲဘာသာပြန်တာကိုသတိပြူမိပါတယ်။
Abdullah Yusuf Ali ကတော့ Proclaim သို့မဟုတ် read
1. Proclaim! (or read!) in the name of thy Lord and Cherisher, Who created (Abdullah Yusuf Ali)
Read in the name of your Lord Who created. (Shakir)
ဆရာဂါဇီဟာရှင်ရဲ့ မြန်မာပြန်မှာ ဖတ်ပါလေ လို့ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။
၉၆း၃ မှာ ဖတ်ပါလေ။ ဖန်ဆင်းရှင်သည်အလွန်ရက်ရောစွာပေးကမ်း
ကျမ်းမြတ်ကုရအန် မှတဆင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအသိပညာ
ကျမ်းမြတ်ကုရအန် မှတဆင့် လောကီ လော ကု တ္တရာ နှစ်ဘဝလုံးအတွက်
ခရမ်းရောင် နဲ့ပြထားတဲ့အပိုင်းဟာ Prefrontal Cortex လို့ခေါ်တဲ့
နေရာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဖူးရဲ့အနောက်တဲ့တဲ့ မှာရှိတဲ့ ဦးဏှောက်
တိုတိုနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရရင် Prefrontal Cortexလို့
နဲ့သေးသိမ်ယုတ်ညံ ခြင်းဆိုတဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးကို
အ င်္ဂလိပ်လို Lying sinful forelock (Forehead) လို့ဆိုပါတယ်။
မြန်မာလိုတော့ “မုသားပြောဆိုလေ့ရှိသော ပြစ်မှူကျူးလွန်လေ့ရှိ
ဒိမှာ ကုရအန်က ဘာကြောင့် မုသားပြောဆိုလေ့ရှိသော ပြစ်မှူကျူးလွန်လေ့ရှိ
သောသူ (လူ)လို့မသုံးပဲဦးစွန်း (forelock) လို့သုံးထားတာဟာ အ လ္လာ အရှင်မြတ် သည်…
“မှတ်လော့(မိမိ၏အပြူအမူများကို) မရပ်စဲခဲ့သော် ထိုအရှင်သည်ဦးစွန်းကိုကိုင်၍
ဆွဲတော်မူမည် “လို့ ဆိုထားတာ ဒီလိုဆိုးသွန်းရမ်းကားနေတဲ့သူရဲ့စိတ်ဓတ်
ဒါပေမဲ ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင့်လေးရာ က အံ့ခမန်းတိကျစွာ
နဲ့ဆင့်ပြန်ထားတာ ဗျာဒိတ်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ဟာ အ လ္လာ အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်လို့
One thought on “ဦးစွန်းမှဆွဲခေါ်ခံရမဲ့လူတွေအကြောင်း”
This Surah is helpful in Dawah.
I got several Dawah books. In those books metion about this surah too.
We need more Burmese Muslims bloggers